» संसदमै सर्वोच्चको चरम आलोचना, ठूला नेताले नै गरे विकास विरोधि अदालती फैसला पुनरावलोकनको माग
२०७९ जेष्ठ १४, शनिबार १७:५२
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनौठो र दुःखद् भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनले यो फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्चको फैसला आकस्मिकरूपमा आएको भन्दै उनले जङ्गल नै नभएको ठाउँमा जङ्गल भएको दाबी गरिएको र सोही आधारमा फैसला भएको अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी छ ।
उनले भने, “सो विमानस्थलको विकल्प के ? रिजनल हब(क्षेत्रीय केन्द्र)का रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको हो, विमानस्थल निर्माण रोकिनुका कारण के हो ?” नेपालले विमानस्थल निर्माण हुने स्थानमा जङ्गल नभएको शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विमानस्थल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि विमानस्थल निर्माणको सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट आएको फैसला विवेकसम्मत नभएको टिप्पणी गरे । उनले विकास निर्माणका सन्दर्भमा अदालतलको आदेशले देशका अन्य आयोजनामा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले ७६१ वटा पक्की घर भत्काउनुपर्ने, चक्रपथकोे एक ठूलो अंश नै सार्नुपर्ने र खोला फर्काउनुपर्ने हिथ्रो विमानस्थलको तेस्रो धावनमार्ग परियोजनालाई बेलायतको उच्च अदालतले निकास दिएको तथ्य पेश गर्नुभएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, “यो तर नेपालमा भने ? वातावरणीय चासो धनी देशलाई भन्दा गरिब देशलाई बढी हुने रहेछ, खुसी हुँ कि दुःखी अन्योलमा परेँ । निजगढ विमानस्थललाई देशको भविष्य ठान्थेँ । निरास भएँ ।”
तीन दशकदेखि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भई थप विभिन्न कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थलका रूपमा निजगढलाई ठहर्‍याइएको थियो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँको सबैभन्दा नजिकको हो । विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा हालसम्म भएका काम रोक्ने सर्वोच्चको आदेशले विकास निर्माणको काममा अवरोध आउने भन्दै सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।